नियोजित रूपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिको टेलिफोन र मोबाइल सम्पर्कका गतिविधिमा हस्तक्षेप गरी गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको भेटिएको थियो । प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:३०
सहरी समाजको एकल परिवार संरचना, सन्तानलाई समय दिन नपाउने अभिभावक, सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिका कारण एक्लै रमाउने स्वभावमा हुर्किरहेका बालबालिकाको अनौठो मनोविज्ञान मुख्य कारक
जेष्ठ २५, २०७६ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — ललितपुर महानगरपालिका–९ गम्छेका हीराकाजी शाक्य आफ्नै घरमा खाजा पसल गर्छन् । यसैबाट उनको परिवार धानिन्छ । जेठ ४ गते बुद्धजयन्तीका दिनको कुरा हो । कामको सिलसिलामा बाहिर गएका उनी चार बजेतिर घर फर्किए ।
बाबुछोरा मात्रै बस्दै आएको घरको मूल ढोका बन्द थियो । उनले छोरालाई बोलाए । आवाज आएन । छोराको मोबाइलमा फोन गर्दा पनि उठेन । त्यसपछि छिमेकी प्रेम शाक्यको घरको छिँडीबाट घरको चौथो तलामा पुग्दा उनले जुन दृश्य देखे, उनको होसहवास उडयो ।
प्लस टु तह अध्ययनरत १९ वर्षीय छोरा युनिक दलिनमा सलको पासो लगाएर झुन्डिएका थिए । युनिकले किन आत्महत्या गरे ? यो प्रश्नको उत्तर परिवारका निम्ति मात्रै रहस्यको विषय बनेन, प्रहरी परिसर ललितपुरलाई पनि जटिल बन्यो । युनिकको आत्महत्या चरम निराशाको परिणाम थियो कि क्षणिक आवेगको ? यसको उत्तर न परिवारसँग छ, न प्रहरीसँग नै ।
पछिल्ला वर्षमा ‘टिएनजर्स’ हरूको आत्महत्याका अनौठा घटना प्रहरीका निम्ति नियमित आकस्मिकताजस्तै हुन थालेका छन् । त्यस्तै भयो, १९ जेठमा । धापासीका १४ वर्षीय बालक विनायक पाण्डे शौचालयमा आत्महत्या गरेको सूचना महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा आइपुग्यो । परिवारका अनुसार ८ कक्षामा पढ्ने विनायक स्कुलबाट फर्केलगत्तै शौचालय छिरेका थिए ।
धेरैबेरसम्म आमाले बोलाउँदा पनि उनी निस्केनन् । आफन्तले शौचालयको ढोका फोडेर भित्र छिरेपछि पो थाहा भयो, उनले फिताको पासो लगाइसकेका रहेछन् । पासोबाट निकालेर परिवारका सदस्यले उनलाई शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुर्‍याएका थिए । घरमै उनको मृत्यु भएको चिकित्सकले पुष्टि गरिदिए । ‘कलिलो उमेरका बालक आत्महत्या गर्ने बिन्दुमा कसरी पुगे भन्ने आफैंमा अनुसन्धानको विषय बनेको छ,’ महाराजगन्ज वृत्तका डीएसपी फणीन्द्र प्रसाईंले भने ।
त्यसो त महाराजगन्ज वृत्तका निम्ति बालबालिका आत्महत्याको यो पहिलो घटना थिएन । फागुन ६ गते बूढानीलकण्ठको मंगलसुन्दर बस्तीमा रहेको नेपाल दलित महिला उत्थान केन्द्र बाल शिक्षालयको होस्टलमा बस्ने ११ वर्षका समुन्द्र मल्लले आत्महत्या गरे । होस्टलकोकोठाभित्र उनी पासो लगाएर झुन्डिएका थिए । उनी दुई कक्षामा पढ्थे ।
कलिलो उमेरका बालबालिकाले आत्महत्या गर्नुको कारण खोतल्नु नेपाल प्रहरीका निम्ति समेत सजिलो छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८८ बालक र ८७ बालिकाले विभिन्न शैली अपनाएर आत्महत्या गरेको देखिन्छ, जसमध्ये झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने बालबालिकाको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६५ बालक र ७९ बालिकाले झुन्डिएर आत्महत्या गरे । २२ बालक र ८ बालिकाले भने विष खाएको पाइएको छ ।
२०७३/७४ मा आत्महत्या गर्ने बालबालिकाको संख्या झनै बढेको देखिन्छ । यो वर्ष १ सय १९ बालक र १ सय ८५ बालिकाले आत्महत्या गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ, जसमा ९९ बालक र १ सय ४९ बालिका झुन्डिएको र १७ बालक र २६ बालिकाले विष सेवन गरेका थिए । २०७४/७५ मा पनि यो संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको देखिँदैन । प्रहरीका अनुसार यो वर्ष १ सय ११ बालक र १ सय ३९ बालिकाले आत्महत्या गरेका थिए, जसमा ९१ बालक र १ सय १८ बालिका झुन्डिएको, १८ बालक र १९ बालिकाले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेका थिए ।
प्रहरीको तथ्यांक भन्छ, ४३ महिनामा १५ हजार ६ सय ३० आत्महत्याका घटना भएका छन् । यसमा बालबालिकाको संख्या ७ सय ५६ छ । यो तथ्यांकअनुसार औसतमा मासिक ३ सय ६३ आत्महत्याका घटना हुन्छन् । त्यसमा बालिबालिकाको संख्या औसतमा मासिक १७ हुन्छ । यो कुल आत्महत्याको झन्डै ५ प्रतिशत हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानिसको मृत्युका प्रमुख २० कारणमध्ये आत्महत्यालाई पनि एक मानेको छ । संगठनले १० देखि १४ वर्ष उमेरसमूहका बालबालिकाको मृत्युका चारमध्ये एक कारण आत्महत्या मानेको छ ।
बालबालिका र वयस्कमा आत्महत्याका प्रवृत्तिबारे नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीको सन् २०१३ मे, अगस्टको जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानले सन् २००५ देखि २००९ मा भएका आत्महत्याका घटनाबारे अध्यययन गरेको छ । उक्त अध्ययनले सन् २००५ पछिका ५ वर्षमा ७ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको आत्महत्या एक सय ५७ देखिएको थियो । यो संख्या कुल आत्महत्याको ७ दशमलव ६ प्रतिशत हो । यही अवधिमा तीनदेखि ६ वर्ष उमेर समूहका ९ बालबालिकाले आत्महत्या गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र एकल परिवार संरचनाबारे बहस नगरेसम्म बालबालिकाले आत्महत्या गर्नुको कारण बुझ्न नसकिने ललितपुर जिल्ला अदालतअन्तर्गतको बाल इजलासमा बाल मनोविज्ञका रूपमा कार्यरत सुनील अधिकारीको बुझाइ छ । उनले डेढ महिनाअघिको एउटा घटना सुनाए ।
हेटौंडाकी एसईई दिएर बसेकी एक बालिकाले अभिभावकसँग मोबाइल मागिन् । अभिभावकले उनलाई प्लस टु सकेपछि मात्रै किनिदिने बाचा गरे । आफ्ना माग पूरा नभएको रिसमा किशोरीले तरकारीमा हाल्ने विषादी खाइदिइन् । भरतपुर अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको प्राण गयो । ‘आफ्नो माग पूरा नभएको झोकमा आत्महत्याको प्रयास गर्ने र त्यो सफल भइदिँदा ज्यानै जाने गरेका घटना धेरै छन्,’ उनले भने ।
सहरी समाजको एकल परिवार संरचना, व्यस्त अभिभावक र सामाजिक सञ्जाल एवं प्रविधिका कारण एक्लै रमाउने स्वभावमा हुर्किंदै गरेका बालबालिकाको अनौठो मनोविज्ञान नै बालबालिका आत्महत्याको कारण बन्ने गरेको छ । ‘पारिवारिक भेटघाटमा पनि रमाउन नचाहने, सामाजिक सञ्जालबाट अरूको देखासिकी गर्ने प्रवृत्ति र आफ्नो माग पूरा गराउन बाबुआमासँग जोरी खोज्दै ज्यानकै बाजी लगाउन पछि नपर्ने बालबालिकाको शैली खतरनाक बन्दै छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले अहिले राष्ट्रियस्तरको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सर्वेक्षण गरिरहेको छ । प्रदेश १, २ र ३ को सर्वेक्षण सकिए पनि अन्य प्रदेशको जारी छ । सर्वेक्षणले १३ देखि १८ वर्ष उमेरसमूहका बालबालिकामा आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति कस्तो छ भन्नेबारे केही तथ्य बाहिर ल्याउने सर्वेक्षणका संयोजक इपिडिमियोलोजिस्ट सुष्मा दाहालको भनाइ छ । परिषद्ले सर्वेक्षणअघि भक्तपुर, धनुषा र दोलखामा १३ सय ७१ वयस्क र २ सय ७६ बालबालिकामाझ पाइलट सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणले बालबालिकामाझ आत्महत्याको प्रवृत्ति ८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
बदलिँदो परिवारको संरचना र प्रविधिको बढदो प्रयोगले बालबालिकामा आत्महत्याको प्रवृत्ति बढाइदिएको दाहालको बुझाइ छ । द्वन्द्वबाट गुज्रिएका अभिभावकको मनोविज्ञान, उनीहरूले सन्तानलाई समय दिन नसक्ने परिस्थिति र यही परिवेशमा उब्जिने निराशालगायत कारण बालबालिकाले आत्महत्या प्रयास गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामाझ आत्महत्याबारे मध्यम खालको मनोवृत्ति रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा बालबालिकामाझ आत्महत्याको दर बढदो रहेको र यसबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा सेवा निर्देशनालयकी एसपी किरण राणाको भनाइ छ । फौजदारी अपराधसंहिताले आत्महत्यालाई पनि अपराध मानेकाले यसबारे गम्भीर छलफल प्रहरीले मात्रै चलाएर नपुग्ने उनले बताइन् ।
आधुनिक बन्ने होड, बालबालिकामाझ हुने तीव्र प्रतिस्पर्धा र त्यसले ल्याउने निराशाजस्ता कारणको खोजी नगरेसम्म बालबालिकाको आत्महत्याको दर रोक्न सकिन्न । ‘अभिभावकले पर्याप्त समय दिने, बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्ने र उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा मात्रै होम्नेभन्दा पनि बलियो आत्मबल बढाउन सके पनि आत्महत्या रोक्न सकिन्छ,’ राणाले भनिन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:२८